Manchester City Oo Doonaysa In Bayern Munich Ay Raalligelin Siiso Sheekh Mansour - Cadalool.com
Manchester City Oo Doonaysa In Bayern Munich Ay Raalligelin Siiso Sheekh Mansour
Ma qarsoona in Manchester City ay lacag badan gelisay suuqa oo ay ciyaartooyo kusoo iibsatay, waxaanay u muuqataa in aanay mulkiileyaasha kooxdani lahayn dhaqaale xaddidaya oo jeeb walba uu u buuxo.
Tan iyo xagaagii 2016 markii uu Pep Guardiola la wareegay tababarenimada Man City, waxa uu kharash gareeyey lacag gaadhaysa £550 milyan, haddana iyadoo waxaas oo dhaqaale ah bixisay saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey, wax ciqaab ah kalamay kulmin UEFA iyo FIFA midkoodna, lagumana qaadin sharciga dhaqaale wanaagga.
Dad badan ayaa iyagoo codkooda hoos u dhigaya farta ku fiiqa dhaqaalaha tirada badan ee ay City suuqa geliso, balse Uli Hoeness oo ah madaxweynaha Bayern Munich ayaa ka badheedhay hadalkan, waxaana uu tilmaamay in marka ay Manchester City u baahan tahay ciyaartoy ay soo qaadaan muuqaal daawasho ah kaddibna ay u gudbiyaan Sheekh Mansoor oo ah mulkiilaha, isaguna uu markiiba gacanta ka saaro lacagta, laakiin taas beddelkeeda uu qaaliyeeyo Saliidda dalka Imaaraadku soo saaro si uu usoo buuxiyo lacagtii uu qasnadda ka saaray.
Haddaba sida uu qoray wargeyska Mirror, Manchester Ctiy ayaa ka dalbatay Bayern Munich iyo madaxweynaheeda inay raalligelin ka bixiyaan hadalkaas, haddii kale ay tallaabo sharci ah ka qaadi doont.
Wargeysku waxa uu sheegay in Man City ay qareenkeeda u sheegtay inuu diyaariyo qodobbadii sharci ee ay ku dacweyn lahaayeen Uli Hoeness, waxaana haddaba soo baxaya in hadalkiisa ay u turjuntay qaab cunsuriyad ah amaba takoor uu kula kacay oo kale.
Si kastaba ha ahaatee, arrinta labada kooxood ayaa la eegi doonaa sida ay ku dambayso usbuucyada soo aaddan.